तपाईंको आजको राशिफल/वि.सं. २०७५ साल असार १९ गते, मंगलबार। | Ekhabar Nepal
धार्मिक असार १९ २०७५ ekhabarnepal
वि.सं. २०७५ साल असार १९ गते। मंगलबार। इश्वी सन् २०१८ जुलाई ३ तारिख। नेपाल संवत् ११३८ तछलागा। आषाढ कृष्णपक्ष। तिथि– पञ्चमी,
आय आर्जनका नयाँ स्रोत फेला पर्नेछन्।आम्दानी बढ्नेछ र उठ्नुपर्ने रकम हातलागी हुनेछ। प्रतीक्षित नतिजाले उत्साह जगाउनेछ। चल-अचल धनको उपयोगबाट मनग्गे फाइदा उठाउन सकिनेछ। कृषि, पशुपालन तथा व्यापारमा प्रशस्त फाइदा हुनेछ। मिहिनेत गर्दा दिगो फाइदा हुने काममा जग बसाउने मौका छ। गरेका कामबाट प्रशस्त लाभ हुनेछ।
नोकरी तथा व्यवसायमा विशेष फाइदा होला।प्रयत्न गर्दा सजिलै लक्ष्यमा पुग्न सकिनेछ। विभिन्न अवसरले पछ्याउनेछन् भने भविष्यका लागि दिगो फाइदा हुने काममा जग बसाउने मौका छ। मिहिनेतले नाम, दाम र इनाम दिलाउन सक्छ। कामको सन्दर्भमा विशिष्ट व्यक्तिहरूसँग मित्रता बढ्न सक्छ। रुचिका विषयमा लगानी बढाउने मौका प्राप्त हुनेछ।
महत्त्वाकांक्षी योजना गोप्य राखेर अघि बढ्नुहोला।बेसुरमा निर्णय लिने बानीले अप्ठ्यारो पार्ने हुँदा सजग रहनुहोला। तत्कालको फाइदा हेर्दा पछिलाई घाटा हुन सक्छ। काम बिग्रने डरले सताउनेछ। साझेदारीमा समस्या आउनाले पहिलेको सम्झौता भंग हुन सक्छ। अरूको फाइदाका लागि उपयोग भइएला। प्रयत्न गर्दा घरेलु समस्या भने सुल्झाउन सकिनेछ।
छोटो समयमा उपलब्धि हातलागी हुनेछ।हिम्मतले काम लिँदा राम्रो फाइदा हुनेछ। स्रोत-साधन जुट्नाले चिताएका काममा सफलता मिल्नेछ। मिहिनेतले दैनिकीमा सुधार ल्याउनेछ। रोकिएका काम बन्ने र नयाँ काम सुरु गर्ने समय छ। उद्योग र व्यापारमा मनग्गे लाभ हुनेछ। शत्रु र प्रतिस्पर्धीलाई पछि पर्दै लाभ उठाउन सफल भइनेछ। दाजुभाइमा आत्मीयता बढ्नेछ।
आफ्ना कमजोरीमाथि टिप्पणी हुन सक्छ, सजग रहनुहोला।मिहिनेत परे पनि नतिजा कमजोर देखिने समय छ। परिबन्धले काममा बाधा पुर्याउन सक्छ। आफ्नो प्रतिफलबाट अरूले फाइदा उठाउन सक्छन्। भैपरी आउने खर्चका कारण त्यति सञ्चय गर्न नसकिएला। वचन पुर्याउन नसक्ता अरूले आलोचना गर्न सक्छन्। शुभचिन्तकहरूको साथले फाइदा हुनेछ।
अवसरका लागि निकै दौडधुप गर्नुपर्नेछ। समयमा होस नपुग्नाले व्यवहारमा पछि परिएला। आफ्नाबाटै टाढिनुपर्ने स्थिति आउन सक्छ।समय दिन नसक्दा काम रोकिन सक्छ। व्यवसायमा लगानी बढाउनुपर्ला। भैपरी आउने खर्चले चिन्ता बढाउन सक्छ। तत्काल फाइदा लिँदा भविष्यको लाभांशमा कमी आउनेछ। यात्राको प्रक्रिया अघि बढाउन सकिनेछ।